Olole lagu daaweyn doono 3 milyan oo xoolo ah oo ka bilaabmay Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandOlole lagu daaweyn doono 3 milyan oo xoolo ah oo ka bilaabmay Puntland
August 31, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan ayaa furay ololaha daaweynta xoolaha. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ololaha daaweynta xoolaha Puntland ayaa maanta oo Sabti ah la daahfuray.
Munaasabada daahfurka ayaa waxaa ka qeybgalay madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan.
Ku dhawaad 3 milyan oo xoolo ah ayaa la daaweyn doonaa inta ololuhu uu ka socdo sagaalka gobol ee Puntland, sida uu sheegay wasiirka xanaanada xoolaha Siciid Cusmaan Aadan.
Inkastoo abaaro soo noq-noqday oo sanadihii la soo dhaafay ka dhacay gobolka ay saamayn balaaran ku yeesheen, xoolaha nool ayaa kamid ah laf dhabarta ugu weyn ee dhaqaalaha Puntland.